सिन्ती झरनाको विकासमा पर्यटन बोर्ड सकारात्मक, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सिन्ती झरनाको विकासमा पर्यटन बोर्ड सकारात्मक
डिसी नेपाल , ९ अषाढ २०७५
कालिका, चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नं. ९ र १० को सीमानामा रहेको सिन्ती झरनाको विकासमा नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक सहयोग गर्न तयार रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक खडग विक्रम शाहले बताएका छन्।
यस क्षेत्रकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास हुँदै गएको झरनाको यथेष्ठ विकास गर्न सके आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए।
सिन्ती झरनाको आज अवलोकन गर्दै प्रबन्धक शाहले झरनालाई व्यवस्थित रुपमा निर्माण गर्न सकेन सौराहा आएका पर्यटकलाई थप गन्तव्यका रुपमा झरनामा ल्याउन सकिने उनले बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्डबाट आवश्यक सहयोग गर्ने समेत उनले बताएका थिए। कालिका नगरपालिकाले सो झरनाको विकास र प्रवद्र्धनको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गर्न लागेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
नगरपालिकामा नगर प्रमुख श्रेष्ठ र प्रबन्धक शाहले आज अनौपचारिक छलफल समेत गर्दै यस क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भाव्यता अध्ययन र विकास गर्न हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने समेत बताएका थिए।
यस अगाडि सिंहनाथ गण शक्तिखोरका नेपाली सेनाहरुले श्रमदानबाट सो झरना जाने बाटो दोगरदेखि झरनासम्म सिढी निर्माण समेत गरिसकेका छन्।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रत्ननगरदेखि शक्तिखोर हुँदै सिद्धि जाने बाटोको दोगरासम्म करिब २५ किलोमिटर मोटर बाटो रहेको छ। दोगराबाट करिब ४५ मिनेटको पैदलयात्रामा सो झरना पुग्न सकिन्छ।
करिब ३५ मिटर लम्बाई रहेको सो झरनामा अहिले आन्तरिक पर्यटकहरुको घुइचो लाग्ने गरेको छ। सो झरनालाई व्यवस्थित गर्न सके पर्यटकीय सम्भावना प्रशस्त रहेको स्थानीयको भनाइ छ।